घरमा papillomas हटाउन: यो के छैन
Papillomas मानव मा विकास को परिणाम हो कि सौम्य growths छन् papilloma भाइरस। यो लामो समय कुनै पनि संकेत दिने छैन, निष्क्रिय हुन सक्छ किनभने यो एक धेरै दुष्ट र धूर्त भाइरस छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। तथ्याङ्क विश्वको जनसंख्याको लगभग 80% भाइरस papilloma को वाहक हो भनेर देखाउँछ, र यो नै महसुस बनाउँछ गर्दा मात्र सिक्न। एक व्यक्ति त्यो तनाव भोगे, दबाइ को एक लामो पाठ्यक्रम लिन्छ वा कम प्रतिरक्षा छ कि कुनै पनि संक्रामक रोग भोगे जब यो अक्सर हुन्छ। papillomavirus सक्छन् देखा र एक महिला एक बच्चा भालु गर्दा। अक्सर papillomas अनुहार, घाँटी, हात, स्तन अन्तर्गत armpits र Folds देखिन्छन्। यसलाई सजिलै अर्को एक व्यक्ति देखि पारित गर्न सकिन्छ, यो एक संक्रमित साइट (जस्तै, हातमिलाउबाट) संग सम्पर्क गर्न पर्याप्त छ। सबैभन्दा खराब भाग अनुपचारित papillomas बायाँ भने, उनीहरूले थप बढ्न र malignancies मा degenerate गर्न सक्नुहुन्छ, छ। यसरी तिनीहरूले तत्काल उपचार, को ढिलो राम्रो गर्न आवश्यक छ। यो कि टिप्पण लायक छ warts हटाउने अन्यथा तपाईं मात्र स्थिति झन् खराब बनाउन सक्छ, घर मा लायक खर्च छैन। परम्परागत विधिहरू प्रयोग गरेर मौका छ, कि राम्रो जोखिम लिन होईन र चिकित्सा सल्लाह खोज्न यी सौम्य ट्यूमर को छुटकारा गर्न। तपाईं घरमा हटाउने warts हुन भने, यो मात्र बाहिरको छ, र उहाँले papilloma भाइरस दबाइ मात्र तरिका द्वारा निको गर्न सकिन्छ। यो जस्तो देखिने स्थायी यी सौम्य हटाउन गरेपछि तिनीहरूले देखापर्नेछ गर्न सक्ने सुझाव।
papillomas हटाउन घर मा, सम्भव, तर अत्यधिक खराब। warts हटाउने लागि विधिहरू फरक छन्, तर तिनीहरू प्रबन्ध हुनुपर्छ मात्र चिकित्सक द्वारा। सायद सजिलो विधि moxibustion छ। यसलाई रासायनिक मतलब छ, द्वारा बाहिर छ, जो, यो को मृत्यु सौम्य नेतृत्व को गठन गर्न आवेदन पछि। एक पाप्रो गर्न जोखिम गठन भएपछि, जो कुनै पनि मामला मा निराश हुन सक्दैन। एक हप्ता पछि पाप्रो बारेमा तल आउन र चिल्लो छाला यसको ठाउँमा देखा पर्नेछ। यो विधि पूरा गर्न घर मा papillomas हटाउन यो केवल एक योग्य टेक्नीसियन हुन सक्छ कसरी त्यसो गर्न, कडाई निषेधित छ। बलिरहेको राम्ररी गरेको छ भने, एक परिणाम, एक घातक ट्यूमर को गठन रूपमा छाला कक्षहरूको एक असामान्य विकास हुन र, भनेर एक likelihood छ।
electrocoagulation प्रयोग warts हटाउने बारेमा राम्रो समीक्षा। यो सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका को छ। यसलाई उच्च आवृत्ति वर्तमान को प्रभावित भागमा प्रभाव मा हुन्छन्। समयमा हटाउने जोखिम गहिराई को स्तर नियन्त्रित छ यो विधि राम्रो र यति छ। यसलाई वर्तमान पठाएमा जो एक विशेष उपकरण, को माध्यम द्वारा प्रक्रिया हो। सामान्यतया, यो coagulation विधि एनेस्थेसिया बिना बाहिर छ, तर त्यहाँ प्रभावित क्षेत्र ठूलो छ, यसलाई अनिवार्य छ।
अर्को विधि, cryosurgery, papilloma हटाउँदछ प्रयोग तरल नाइट्रोजन। यो अन्त गर्न, एक विशेष applicator यो कुरा मा wetted र सौम्य मा superimposed छ। त्यसपछि papilloma darkens र गायब। यो प्रक्रिया को मुश्किल भाग यसलाई त्यहाँ कपडा मा प्रभाव को गहिराई नियन्त्रण गर्न कुनै संभावना छ रूपमा ट्यूमर, पूर्ण हटाइएको छ कि संभावना छ भन्ने छ।
हामी papillomas हटाउन को शल्य विधि कुरा भने, यो एक काटन स्केलपेल ट्यूमर implies। यो प्रक्रिया आवश्यक स्थानीय एनेस्थेसिया अन्तर्गत गरेको छ। आज यो सुरक्षित शल्य चिकित्सा प्रविधी, एक लेजर स्केलपेल रूपमा धेरै लोकप्रिय छ। लेजर उपचार पछि वस्तुतः जटिलताहरू देखिँदैन। साथै, एक लेजर स्केलपेल प्रयोग गरेर कुनै पनि आकार को र सही गहिराई मा ट्यूमर हटाउन सक्नुहुन्छ।
कसरी घर मा एक नरम एडी बनाउन: सुझावहरू बालिका
समीक्षा र दक्षता: को लागि मुखासे गाजर मास्क
स्वादिष्ट छाला हेरविचार: चकलेट अनुहार मास्क
कसरी तपाईंको अनुहार पसीना छैन भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस्? समस्याको सजिलो समाधान
अनुहार को यांत्रिक सफाई - यो के हो? प्रक्रिया, contraindications, समीक्षा को विवरण
घर मा एक व्यक्ति को लागि एक भाप स्नान
आरजी-213 उच्च आवृत्ति केबल
Amphetamine को तयारी
अनुहार मा बढेको pores उपचार: सुझावहरू
तयारी "Sealeks": प्रतिक्रिया र योजनाको योजना
नाइटक्लब Togliatti: हरेक आगन्तुक लागि लडाई मा
माटोको टाइल: घनत्व, वजन, प्रकार र उद्देश्य
"विशेषताहरु Lyumii 640": संचार, हार्डवेयर, क्यामेरा
पाइन नट र चिकन एक सलाद तयार कसरी फरक
एसएमएस को "Kiwi" बाट आउँछ: समस्या गराउनुहुन्छ र समाधान